ယှနျးယှနျးကွောငျ့ အုပျစိုးခနျ့နဲ့ ဘုနျးမငျးနလေပွဿနာ စတကျပီ - ApannPyay Media
ဒီကိစ်စလေးရောသိပီးကွပီလားဟငျ 😯 မနညေ့က အုပျစိုးခနျ့တငျတဲ့ My Day နဲ့ ခငျဇာခွညျကြေျာ့သား ဘုနျးမငျးနလေတငျတဲ့ My Day လေးအကွောငျး 😶 ယှနျးယှနျးနဲ့စညျသူဝငျး ခိုးဖောကျပွနျတာ သိရတဲ့ စာတှဖေတျပီး ယှနျးယှနျးနဲ့ ရညျးစားဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ အုပျအုပျက သူနဲ့ဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ကောငျမလေးက ဒီလိုကွီး ပါလား ငါနဲ့ပွတျတာ ကံကောငျးတယျဆိုပီး ဘုရား သခငျကိုကြေးဇူးတငျလိုကျကွောငျး My Day မှာတငျ လိုကျပါတယျ …
စာတှရှေညျလို့ ပုံလေးတှထေောကျ ကွညျ့ပီး ဆကျဖတျတော့နျော 👇👇👇👇👇👇👇 ဘုနျးမငျးနလေဟာ အကယျဒမီ ခငျဇာခွညျကြေျာ့သား ဖွဈသလို မွတံခှနျ အောငျသနျးဆုထီဆိုငျပိုငျရှငျရဲ့သား လဲ ဖွဈပါတယျ . အဖနေဲ့အမကေ သူငယျငယျကတညျး က ကှဲနပေမေယျ့ ဖခငျဖွဈသူက သူ့သားကို ယခုအခြိနျ ထိလိုလသေေးမရှိ မုနိ့ဖိုးပေးနလေို့ အေးအေးလေးနဲ့ ဆိုးနတေဲ့ ကုတျကမငျြးလေးအဖွဈ လူသိမြားပါတယျ .
ဘလုတျကငျးဖရမျမီ ကကွီးပွငျးလာသူမလို့ အခဈြကို အယုံအကွညျမရှိပါဖူး . သူဟာ ယှနျးယှနျးနဲ့လဲ ငယျစဉျ ကတညျးက သူ့အမေ ရှုတငျတှနေောကျလိုကျရငျး ရငျးနှီးခဲ့ပါတယျ . သူ့အကူအညီနဲ့ အုပျစိုးခနျ့ ဆိုတဲ့ သွင်ျကနျသီခငျြးမှာ ယှနျးယှနျးသရုပျဆောငျပေးဖို့ ပွောလို့ ယှနျးယှနျးက သရုပျဆောငျပေးခဲ့တာပါ 👇👇👇👇👇 ဟနျလေးကလဲတခွားသူမဟုတျပါဖူး . ဟ
နျလေးက အနုပညာလောကထဲ ဝငျပီးပီးခငျြး မျောဒယျအောငျလေး နဲ့တရားဝငျ နှဈအတျောတျောကွာတှဲခဲ့ပါသေးတယျ . ဟနျလေးတို့ တှဲနတေုနျး Cele Cele Small Page က မူဆယျမှာ ဟနျလေးယောင်ျကြားရှိပီး ကိုယျဝနျဖကျြခဖြူး ကွောငျး သကျသပေုံတှနေဲ့တငျလိုကျတဲ့အတှကျ အောငျလေးက လမျးခှဲခငျြနတောကွာပါပီ . သို့ပမေယျ့ လဲ ဟနျလေးအတိတျတငျတဲ့ Cele Cele Small Post အောကျမှာ ” သူ့မှာ ကနြျောနဲ့မတှခေ့ငျ ဘာအတိတျ ပဲရှိခဲ့ ရှိခဲ့ ကနြျောကတော့ ဆကျခဈြနမှောပါ ” လို့ Comment ဝငျရေးခဲ့လို့ Cele Cele Small ကလဲ ” တကယျဟုတျပါစနေျော .
ဆယျစောငျ့ကွညျ့နမေယျ ဒီမနျ့ကို Ss ရိုကျထားလကျတယျနျော . အိုခီ.. .ဟုတျ ကြိုငျးဇူးပါစငျ့ ” လို့ Reply ပွနျပီး ခပြေခဲ့ပါတယျ . သိပျမကွာပါဖူး သူတို့ တကယျ ကှဲသှားပါတယျ 👇👇👇 အခုလို ဝငျရောကျဖတျရှု့ပေးကွတဲ့ တဈယောကျခွငျးစီတိုငျး ကနျြးမာပြျောရှငျသော နရေ့ကျမြားပိုငျဆိုငျနိုငျကပြါစေ။ crd
ယွန်းယွန်းကြောင့် အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလပြဿနာ စတက်ပီ
ဒီကိစ္စလေးရောသိပီးကြပီလားဟင် 😯 မနေ့ညက အုပ်စိုးခန့်တင်တဲ့ My Day နဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော့်သား ဘုန်းမင်းနေလတင်တဲ့ My Day လေးအကြောင်း 😶 ယွန်းယွန်းနဲ့စည်သူဝင်း ခိုးဖောက်ပြန်တာ သိရတဲ့ စာတွေဖတ်ပီး ယွန်းယွန်းနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အုပ်အုပ်က သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ကောင်မလေးက ဒီလိုကြီး ပါလား ငါနဲ့ပြတ်တာ ကံကောင်းတယ်ဆိုပီး ဘုရား သခင်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ကြောင်း My Day မှာတင် လိုက်ပါတယ် …
စာတွေရှည်လို့ ပုံလေးတွေထောက် ကြည့်ပီး ဆက်ဖတ်တော့နော် 👇👇👇👇👇👇👇 ဘုန်းမင်းနေလဟာ အကယ်ဒမီ ခင်ဇာခြည်ကျော့်သား ဖြစ်သလို မြတံခွန် အောင်သန်းဆုထီဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သား လဲ ဖြစ်ပါတယ် . အဖေနဲ့အမေက သူငယ်ငယ်ကတည်း က ကွဲနေပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့သားကို ယခုအချိန် ထိလိုလေသေးမရှိ မုနိ့ဖိုးပေးနေလို့ အေးအေးလေးနဲ့ ဆိုးနေတဲ့ ကုတ်ကမျင်းလေးအဖြစ် လူသိများပါတယ် .
ဘလုတ်ကင်းဖရမ်မီ ကကြီးပြင်းလာသူမလို့ အချစ်ကို အယုံအကြည်မရှိပါဖူး . သူဟာ ယွန်းယွန်းနဲ့လဲ ငယ်စဉ် ကတည်းက သူ့အမေ ရှုတင်တွေနောက်လိုက်ရင်း ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ် . သူ့အကူအညီနဲ့ အုပ်စိုးခန့် ဆိုတဲ့ သြင်္ကန်သီချင်းမှာ ယွန်းယွန်းသရုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ပြောလို့ ယွန်းယွန်းက သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ 👇👇👇👇👇 ဟန်လေးကလဲတခြားသူမဟုတ်ပါဖူး . ဟ
န်လေးက အနုပညာလောကထဲ ဝင်ပီးပီးချင်း မော်ဒယ်အောင်လေး နဲ့တရားဝင် နှစ်အတော်တော်ကြာတွဲခဲ့ပါသေးတယ် . ဟန်လေးတို့ တွဲနေတုန်း Cele Cele Small Page က မူဆယ်မှာ ဟန်လေးယောင်္ကျားရှိပီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖူး ကြောင်း သက်သေပုံတွေနဲ့တင်လိုက်တဲ့အတွက် အောင်လေးက လမ်းခွဲချင်နေတာကြာပါပီ . သို့ပေမယ့် လဲ ဟန်လေးအတိတ်တင်တဲ့ Cele Cele Small Post အောက်မှာ ” သူ့မှာ ကျနော်နဲ့မတွေ့ခင် ဘာအတိတ် ပဲရှိခဲ့ ရှိခဲ့ ကျနော်ကတော့ ဆက်ချစ်နေမှာပါ ” လို့ Comment ဝင်ရေးခဲ့လို့ Cele Cele Small ကလဲ ” တကယ်ဟုတ်ပါစေနော် .
ဆယ်စောင့်ကြည့်နေမယ် ဒီမန့်ကို Ss ရိုက်ထားလက်တယ်နော် . အိုခီ.. .ဟုတ် ကျိုင်းဇူးပါစင့် ” လို့ Reply ပြန်ပီး ချေပခဲ့ပါတယ် . သိပ်မကြာပါဖူး သူတို့ တကယ် ကွဲသွားပါတယ် 👇👇👇 အခုလို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကျပါစေ။ crd